फोहोरमैलाको अर्थ र यसको ब्यवस्थापन ।
बाणगंगा, २४ वैशाख ।
फोहोरमैला भनेको काम नलाग्ने भनि फालेका वस्तु प्लाष्टिक, कागज, फलामका टुक्रा, काचका बट्टा, सिसाका बोतल, टिनका पाता, रङका बट्टा र वाल्टी, भान्साबाट निस्किने तरकारी केलाएका बोक्रा, तरकारी खुर्केका भूस, विग्रीएका वा कुहिएका बासी खाना, खरानी, कोइला, तरकारी मुठ्ठा पारेका पराल, भिमल, र अन्य बान्ने वनाएका त्यान्द्रा, पोको परेर ल्याएका कागज, बट्टा, प्लास्टिक झोला, धूलो कसिंगर, आदी वस्तुहरुलाई जथाभावि र जहाँ पायो त्यही फालेमा फोहोर मैलाका रुपमा चिनिने सवैलाई फोहोरमैला भनिन्छ । तर फोहोरमैला भनेको सडेगलेको घिनलाग्दो वस्तु मात्र नभै कामलाग्न सक्ने वस्तु यत्रतत्र छरिएको फालिएको वस्तु हो । यसको उत्पत्ति कसरी र कहाँबाट हुन्छ ? फोहोर बाट के के हानी नोक्सानी र के के फाइदा र वेफाइदा छन् ? फोहोर व्यवस्थित गर्न को को जिम्मेवारी हुनुपर्दछ र किन ? फोहोर मैला कसरी र कहाँ लिएर तह लगाउने भन्ने कुराको सबै सरोकारवाला पक्ष लाई जानकारी हुन अति जरुरी हुन्छ । जो जिम्मेवारी पक्ष हो त्यो पक्ष किन जवाफदेही बन्न सकिराखेको छैन र फोहर मैलाको व्यवस्थापन गर्न सकिराखेको छैन भन्ने कुराको जानकारी हुन पनि जरुरी छ । फोहोर कति प्रकारको हुन्छ ? यसको किसिम कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको पनि जानकारी हुन जरुरी हुन्छ । फोहर मैला भनेको घीन लाग्दो चिज, वस्तु, मलमूत्र लगायतका दुर्गन्धित वस्तु, चीज बिज र मयलले हेर्न नहुने, काम नलाग्ने कालो धमिलो र मैलालाई नै फोहर मैला भनिन्छ । फोहोरमैलालार्इ दुर्इ किसिमले हेरिन्छ त्यो भनेको ठोस र तरल दुबै हुन्छ ।
हाम्रो घरघरमा प्रयोग गरेर बाँकी रहेका काम नलाग्ने वस्तुहरु उद्योग धन्दा कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरुबाट निस्किएका वा वस्तुहरु खेतबारीबाट उत्पादित भएका फ्याकिने वस्तुहरुलाई नै ठोस फोहोर मैला भनिन्छ । जो कोहीले काम नलाग्ने भनि फालेका वस्तु अर्कोलाई काम लाग्ने पनि हुन सक्छ । ती वस्तुहरु कच्चा पदार्थका रुपमा पनि प्रयोग ल्याउन सकिन्छ । जस्तै प्लाष्टिक, कागज, फलामका टुक्रा, काचका बट्टा, सिसाका बोतल, टिनका पाता, रङका बट्टा र वाल्टी आदिलाई फाल्छौ तर पछि तिनै वस्तुहरु सम्वन्धित कारखानाहरुमा लिएर विक्रि गरेमा धेरै पैसामा विक्रि गर्न पनि सकिन्छ । त्यस्तै तरकारी केलाउँदा निस्केका वोक्रा, फलफूल खाएका बोक्रा र झारपातलाई किसानले कम्पोष्ट मल बनाउँदा प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् । विशेष गरी चर्चा परिचर्चामा ठोस फोहोरको नै बढी आउँछ ।
जैविक फोहोर र अजैविक फोहोर भनेर दुई प्रकारले छुट्याउन सकिन्छ । जैविक फोहर भनेको शेष नै नरहने गरी कुहिएर जाने फोहोरलाई जनाउँछ । जैविक फोहोरमा खास गरेर वोटविरुवा, झारपात, माटो, मरेका जनावर, पशुपंक्षी अन्नपात र अरु खाने कुरा लगायत अन्य कुहिने वस्तु र चीज बिज आदि पर्दछन् । यस्तै खालका जैविक पदार्थलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर समय समयमा वल्टाई पल्टाई पारी कम्पोस्ट मल पनि बनाउन सकिन्छ । अर्को अर्थमा भन्दा यी जैविक पदार्थबाट नै माटो बन्द छ र जमिनमा मिसिन्छ । त्यसैगरी अजैविक फोहोर भनेको नकुहिने वस्तु वा पदार्थलाई भनिन्छ । नकुहिने वस्तु वा चिज वा कतिपय पदार्थलाई हामी पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्दछौ । विभिन्न प्रकारका सिसिहरु, बट्टाहरु घरायसी कामको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । चिडिएका च्यातिएका लुगाकपडाहरुबाट नयाँ किसिमका चकटी, तकिया, डसना बनाउन पनि सकिन्छ । एकपटक प्रयोग गरी सकेपछिको पोलिथिन झोला सफा गरेर नफाटेसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ तर कुनै कुनै अजैविक पदार्थलाई फेरी पनि प्रयोग गर्न सकिदैन । च्यातेका पोलिथिन झोला फुटेका सिसी, कुच्चिएका बट्टाहरु, स्टिल फुटेका भाडावर्तन गाल्न वा पगाल्न नसकिने प्लास्टिक मिसिएको कागज, च्यातिएका जुत्ता चप्पल, आदिलाई फेरी प्रयोग गर्न सकिदैन । ती मध्ये कागज, कपडा, फलाम, सिसी, प्लास्टिक, पोलथिन आदिलाई कारखानामा लिएर केही नयाँ सामान बनाउँन सकिन्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा कुनै पनि फाल्तु वस्तुलाई फोहोरमैला केहि नलिएर त्यसको महत्व बुझ्न सकेमा हेर्दा पनि ठोस फोहोर मैलाको समस्या त्यति जटिल हुन पाउदैन । फाहोरमैलालाई हामीले यसका स्रोत र प्रयोग गर्ने विधिमा प्रचारप्रसार गर्नु जरूरी छ ।
फोहोर मैला निस्किने स्रोतहरुमा विशेष गरी भान्साबाट, घरबाट निस्किने फोहोर, घर बाहिरबाट निस्कने फोहोर, विद्यालयबाट निस्निे फोहोर, बजारबाट निस्किने फाहोर जस्ता फोहोर निस्कने श्रोतहरू हुन ।
हरेक घरका भान्साहरुबाट हरेक प्रकारका फोहोरमैला निकिन्छन् । भान्साबाट निस्किने फोहोर वस्तुहरुमा तरकारी केलाएका बोक्रा, तरकारी खुर्केका भूस, विग्रीएका वा कुहिएका बासी खाना, खरानी, कोइला, तरकारी मुठ्ठा पारेका पराल, भिमल, र अन्य बान्ने वनाएका त्यान्द्रा, पोको परेर ल्याएका कागज, बट्टा, प्लास्टिक झोला, धूलो कसिंगर, आदी । यस्ता वस्तुहरुलाई जथाभावि र जहाँ पायो त्यही फालेमा फोहोरमैलाका रुपमा रही रहन्छन् । यी फोहोर नै भान्सा बाट निस्किने फोहोर हुन् । यसलाई राम्रोसँग ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । यसै गरी घरबाट निस्किने अन्य फोहोरहरुमा भान्साबाट बाहेक अन्य ठाउँहरुबाट पनि काम नलाग्ने फाल्तु वस्तुहरु निस्किन्छन् । चिरिएका वा फाटेका लुगा कपडा, विभिन्न प्रकारका कागजहरु, सिसाकलमका टुक्रा काटेका भुस, धुलो, बट्टा, सिसीहरु, माकुराको जालो र अन्य वस्नुहरु आदि घरबाट निस्केका फाल्तु वस्तुहरुलाई घरबाट निस्केका फोहोर भनिन्छ । विभिन्न प्रकारका वोटविरुवा, झारपात माटो, इट्टा, ढुङ्गा, रोडा, काठका टुक्रा, छारोधुलो, वालुवा, मरेका विभिन्न प्रकारका पशुपंक्षीका अवशेष छाला हड्डी, बङ्गारा, आदी घरबाहिरबाट निस्किने फाल्तु वस्तुलाई नै घरबाहिबाट निस्कने वस्तु नै फोहोर हुन् । अन्य क्षेत्रबाट पनि फोहोर निस्कने गर्दछ । जस्तै विद्यालयहरूबाट निस्किने फोहोर वस्तुहरुमा खास गरेर कागजका विभिन्न प्रकारका टुक्रा, चक, सिसाकलमको धुलो, बिस्कुट, चक्लेट, पाउरोटी, लगायत अन्य खाने वस्तु मोरेका वा बेरेका खोलहरु र खाना नास्ता खाएर बचेका खानाका शेष प्लाष्टिक झोला, धुलो माटो, भूईबाट निस्केको लेउटा आदी । काम नलाग्ने खालका अन्य विभिन्न बस्तुहरु नै विद्यालयहरूबाट निस्किने फोहोर हुन् । खास गरी सबैभन्दा बढी फोहोर निस्किने भनेको बजारबाट नै हो । यहाँबाट विभिन्न प्रकारका काम नलाग्ने वस्तु तथा चीजबिजहरु निस्किन्छन । त्यसको व्याख्या गरेर साध्य नै छैन । कागजका टुक्रा, कपडाका टुक्रा, विभिन्न प्रकारक तारका टुक्रा, रङका टुक्रा, वाल्टि, फलामका टुक्रा, छाला, जुत्ता, चप्पल, बाकस, झोला, टाएरका टुक्रा, पुराना लुगा कपडा, फाल्तु छाता, ब्रिफकेश चुरोटका बट्टा, विस्कुट, चक्लेट मिठाई विभिन्न प्रकारका, सुर्ति खैनीका बट्टा खोल, चाउचाउ, लगायतका खाद्य वस्तु राखेका खोल, रित्ता बोतल, होटलबाट निस्किने विभिन्न प्रकारका फाहोर सामान राखेका मध्ये अधिकांश फोहोरमैला पसल र होटल, उद्योग धन्दा र कलकारखानाबाट निस्किने फोहोर नै भयावह प्रकारको फोहोर हुन्छ । यस्तो फोहोरलाई सबै सरोकार पक्षले सचेत रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ ।
फोहोरबाट सम्बन्धमा धेरै ब्याख्या गर्न नपर्ला किनकी फोहोरबाट हानी नोक्सानीका विषयमा सवै जानकार भएको पाईन्छ । फोहरमैला मानव स्वास्थ्यको लागि मात्र हानीकारक नभई वातावरण र विश्व व्रह्माण्डकै लागि हानीकारक वस्तु हो । फोहोर मैला जताततै गर्नाले वातारण नै अशोभनीय देखिनुका साथै गन्हाउने हुन्छ । दुर्गन्धको थुप्रोमा झिङ्गा भन्किने र झिङ्गाले फोहोरमा रहेका किटानुहरुलाई सारेर विभिन्न प्रकारका ठाउँहरुमा फैलाउने गर्दछ । पानीमा फ्याकेमा फाहोर मैला झन पानीलाई नै दूषित गराई त्यस्तो पानीको प्रयोगबाट सारा प्राणीलाई नै पानीबाट बिभिन्न प्रकारका रोगहरु लाग्न सक्दछन् । आज भन्दा केही बर्ष अगाडी वा पहिले पहिले फोहोरलाई जलाउनु पर्ने काम राम्रो मानिन्थ्यो । तर आजभोली फोहोरमैला र प्लास्टिक जलाउनुले वायुमण्डलमा कार्बोनको मात्रा अत्यधिक भै वातावरण नै दुषित बनाई ब्रह्माण्ड दूषित भई सबै जिवित प्राणीलाई हानी नोक्सानी पुराउने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
प्राणी जगतलाई नै असर र नोक्सानी पुराउने फोहोरमैलालाई व्यवस्थापन गर्न सवै पक्ष समयमा जागरूक हुनु जरूरी छ । फोहोरमैलालाई व्यवस्थापन गर्न धेरै उपायहरु छन् । फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा हुने समस्यालाई समाधान गर्न सबै मानिसहरु सचेत हुन अति जरुरी छ । फोहोर मैलालाई जति सक्यो छिटो कम गर्न सक्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । बजार तथा पसलहरुमा सामान किन्न आउँदा सामान किन्ने व्यक्तिले आफैले सामान राख्ने झोला वा अन्य कुनै भाँडो लिएर बजार जानु उचित हुन्छ । जसले गर्दा पसलबाट सामानका पोका पारी दिने कागज तथा प्लाष्टिक झोला क्रेताको घरमा आउन पाउदैन र फोहोर मैला पनि बढ्न पाउदैन । केही फोहर वस्तुलाई पुनः त्यसैलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । एक पटक प्रयोग गरी सकेको वस्तु वा पोलिथिन झोला र प्लास्ष्टिकका बट्टाहरुलाई सफा गरेर फेरी प्रयोगमा ल्याउनु र लेखि सकिएका कापीबाट झोला वा खाम बनाई पसलमा पोको पार्न प्रयोग गर्नु पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । हर्लिक्सका बट्टा, सिसीहरु, मसला, घिउ, तेल, दाल,बेसार विभिन्न प्रकारका बीउ आदि राख्न प्रयोग गर्नु वा तिनको बट्टाहरुलाई कलम, काँइयो, बुरूस लगायतका सामान राख्ने भाँडाका रुपमा प्रयोग गर्नु वा अन्य सामानहरु राख्ने बनाउन सक्नु पनि पुनः प्रयोगका उदाहरणहरू हुन् । जैविक वस्तुलाई जम्मा गरेर लाभदायक कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ । कागज, प्लाष्टिक, सिसा, फलाम र अन्य एलमोनियमका भाँडा वस्तुहरुलाई घोलेर पगालेर कारखानाहरुमा नयाँ वस्तु बनाउन सकिन्छ । कतिपय वस्तुहरु अलग अलग ठाउँहरुमा जम्मा गर्न सकेमा ती वस्तुहरु कवाडीले तौलका आधारमा वा एकमुष्ट रुपैयाँ दिई लैजान्छन् र फोहोर सदुपयोग हुन्छ जसले गर्दा फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्न सकिन्छ । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन गै समृद्ध बनाउन सकिन्छ । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका माध्यमबाट समाजमा लुकेर रहेको गरीवी घटाउन ठूलो योगदान पुराउछ । फोहोर ब्यवस्थापनमा सवैको सकारात्मक सहयोग भएमा उचित फोहोर ब्यवस्थापन हुने र स्वस्थ्य समाजको निर्माण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सहरी क्षेत्रका घरहरुबाट निस्किएका वाक्ला बस्तुहरुलार्इ जथाभावी फालेर फोहोर बनाउन हुदैन । फोहोर मैलालाई जथाभावी तरिकाले बाटोमा फाल्नु हुदैन । फोहोरलाई कन्टेनरमा, बोरीमा, विभिन्न प्रकारका झोलाहरुमा र तोकिएको ठाउँमा लिएर मात्र थुपार्न सक्नु पर्दछ र फोहोर ब्यवस्थापनको गाडी आएर डम्पिङ साइटमा लैजाने गर्दछ र यसो हुन सकेमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यस्ता विभिन्न तरिका अप्नाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकेमा हाम्रो घरवरपरको वातावरणमा रहेका ठोस फोहोर मैलाहरुमा कमी ल्याई वातावरण सफा राख्न सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा वातावरण स्वच्छ देखिनुका साथै प्राणी जगत र मानव जीवनमा पनि स्वस्थ्यकर बानीको विकास हुन्छ । विद्यालय, कार्यालय र घरका वरपरका फोहोरहरु संकलन गरी जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याई ती मध्येबाट पनि अजैविक फोहोरलाई जल्ने नजल्ने फोहोरको रूपमा अलग अलग गरी ती दुवै प्रकारका फोहोरहरु कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबै सरोकारवाला पक्ष मिलेर फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सकेमा वाताबरण राम्रो बन्न गई हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो बन्न सक्छ ।
फोहोर व्यवस्थापन ऐनले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको कारण यस प्रति स्थानिय तह बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नका लागि जनतामा सचेतना फैलाउनु पर्दछ । सचेत र जिम्मेवार व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता, सिप, ज्ञान, सद्भाव, नियत, इच्छा, शक्ति, दुरदृष्टि, सुसंस्कार, सिद्धान्त, अनुभव, स्वतन्त्र, निस्पक्ष, तटस्थ, इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरूबाट फोहोरमैलाका लागि सहयोग भएमा मात्र उचित ब्यवस्थापन भै स्वस्थ्य समाजको निर्माण हुनेछ । जनताले आशा र भरोसा गर्ने योग्य उमेदवारलाई स्थानीय तहमा आफ्नो अमूल्य मत दिई जनप्रतिनिधि चयन गर्दैछन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि फोहोर ब्यवस्थापनमा जोड दिने छन् ।
अन्त्यमा फोहोरमैला ब्यवस्थापनको जिम्मा कानून बमोजिंम स्थानीयतह कै हो । स्थानीय तह बनेको कारणले दिन प्रतिदिन बस्ती बढ्दै छ र फोहोर पनि बढ्दै छ । आजैदेखि फोहोर प्रति चासो नदिने हो भने यसले भयावह रुप लिने छ र दुर्गन्ध फैलाउने छ । यसरी अवका दिनमा स्थानीयतहलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिनु भन्दा स्थानीय तहले समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएमा फोहोरमैला समस्याको समाधान हुने छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिछ ।
लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।